Indonesia in Focus: Indonesian akụ na ụba iwu ngwugwu ga inupụ n'ụwa aku na uba n'ime ike
Indonesian akụ na ụba iwu ngwugwu ga inupụ n'ụwa aku na uba n'ime ike
The na-agba ịnyịnya na-okokụre (382)
(Part narị atọ na iri asatọ na abụọ, Depok, West Java, Indonesia, November 12, 2015, 19:05 pm)
President nke Indonesia Joko Widodo ka ulo oru a ngwugwu nke isii akụ na ụba atumatu na-atụ anya na-agba ume ubara anụ ụlọ na ndị mba ọzọ ego, na-akpali aku n'uba evenly na Indonesia.
Otu ihe atụ nke mgbe akụ na ụba mba na-eto nanị 4.5 percent kwa afọ, mgbe ahụ, na 2015 na fishery oru toro asatọ percent na ugbo oru toro site nkezi nke karịrị pasent 6, ọbụna ma ọ bụrụ na ntọhapụ nke ndị isii ngwugwu nke aku na uba atumatu na ga-esochi na-esote frasi nke akụ na ụba iwu ngwugwu, mgbe ahụ, ọ gaghị ekwe omume na 2030 Indonesia ga-akarị akụ na ụba nke Australia na South Korea, Indonesia na ọbụna ugbu a ugbua karịrị ike nke UK aku na uba na nwere nwere na-họọrọ 9 n'ụwa aku na uba.
Ugbu a, ọ na-ọzọ-eto n'ike n'ike Asia aku na uba na shifting akụ na ụba mmetụta nke United States na Europe. Ọ bụ ya mere na United States malitere ọzọ ilekiri Asia ma malite shifting ya aku na uba mbọhọ ka Europe na Middle East site guzosie ike Poros Trans Pacific Economic Cooperation mba.
Jokowi ghọrọ ọdịdọ Abụọ Axis World Economic Ike
Beijing - mmejuputa iwu-nke APEC elu ugwu na 2014 na Beijing, China ghọrọ arena nke metụtara n'etiti abụọ shaft ike nke n'ụwa aku na uba, United States na otu akụkụ na China na Russia na ndị ọzọ. President Joko Widodo (Jokowi) ndị ọhụrụ ka mba ogbo ghọrọ a ọkpụkpụ nke esemokwu n'etiti ha.
America sonyeere Trans-Pacific Partnership (Trans-Pacific Partnership / TPP). TPP bụ a free ahia nkwekọrịta nke sochiri iri na asaa mba na Asia-Pacific na-esochi ụfọdụ ASEAN mba, ya bụ Malaysia, Singapore, Brunei, na Vietnam.
Mgbe Russia banyere Asia-Pacific Free Trade Mpaghara (Free Trade Area nke Asia Pacific / FTAAP). FTAAP-ewere dị ka mgbalị kwupụta Regional Economy Integration (REI) n'ihi na-akọrọ ọganihu na mpaghara.
President nke Republic nke Indonesia Joko Widodo kwuru Indonesia achọghị ịbụ nnọọ a esiri nke ahịa maka akụ na ụba ọdịmma nke nnukwu mba na ma ihe dị mkpa bụ imekọ ihe ọnụ nwere ike inye-erite ezigbo uru ka Indonesia.
"N'ezie, ọ bụrụ na anyị anya na ihe ndị metụtara anya n'ihi na ndị enyi. Anyị onwe anyị free n'usoro ochichi bụ n'ọrụ. Achọrọ m chọta enyi onye ọ bụla nwere ike Dong, ga-here- ebe a. Ma na ndekọ nke mba mmasị, na-ebute ọdịmma nke ndị anyị nwere n'okpuru-n'otu, "wee sị President Jokowi, Monday (11/10/2014) n'abalị.
Jokowi nnọpụiche doro anya na anya mgbe foto nnọkọ na ndị ndú nke APEC elu ugwu na 2014. E Jokowi guzoro flanked site US President Barack Obama na Chinese President Iri na Otu Jinping Alliance na Russian President Vladimir Putin.
"Ọ bụ ihe nnọchianya, ọ ga-agụ. Anyị ghọrọ ọdịdọ otú loh, "wee sị Jokowi mgbe Kpughee pụtara ọnọdụ ahụ.
Ịtụle Trans Pacific Partnership
Executif Director nke Central Ọmụmụ Of Asia Pacific (CSAP)
Jokowi President si gaa United States na-eweta a otutu ntule, karịsịa ebe ọ bụ President kwuru na-egosipụta uche isonyere Trans-Pacific Partnership (TPP).
Ọ bụ ọtụtụ ndị na kweere na mba ọzọ amụma n'ebe Indonesia a ugbu a-aga United States.
Ma, e wezụga ọchịchọ isonyere TPP ma ọ bụ, anyị kwesịrị maara na taa, na akpa ka mba na Asia Pacific mpaghara bụ nnọọ mkpa maka imekọ ihe ọnụ na mmepe aku n'uba.
"Ma, e wezụga ọchịchọ isonyere TPP ma ọ bụ, anyị kwesịrị maara na taa, na akpa ka mba na Asia Pacific mpaghara bụ nnọọ mkpa maka imekọ ihe ọnụ na akụ na ụba mmepe"
Asia-Pacific òtù ekwesịghị na-anọchi anya otu mba na ndọrọ ndọrọ ọchịchị burukwa kama eke a echiche nke ịha nhata n'etiti ọ bụla ná mba nke mere na ọ pụrụ irite uru ọ bụla so na-ekwu.
Ya mere, ajụjụ na-ebilite ime ihe a na President kwuru Jokowi ndị chọrọ isonyere TPP bụ banyere ihe stratejik uru na ike ga-eme maka Indonesia?
Tupu anyị azaa a ikpe N'ezie anyị mkpa-achọ ileba anya miri banyere nwere nke ihe a na ekesịpde Indonesia na mba arena.
Taa, anyị maara na akụ na ụba ụwa na-agbanwe agbanwe si Atlantic nke oge nke na Pacific oge otú udiozi ọrụ nke Asia-Pacific mba na-adị nnọọ gbakọọ. Na Indonesia ugbu a, otu n'ime ihe ndị kasị nwere ike ịghọ isi ọkpụkpọ na Asia Pacific mpaghara.
Interest dị iche iche mba gosi na tug nke agha n'etiti agha nke akụ na ụba ụwa na-uche nke Indonesia. Otu n'ime ha a na-eme site na àjà a dịgasị iche iche nke ulo oru mbo ego ikwado mmepe burukwa na mba.
Otu nwere geopolitical ọnọdụ nke Indonesia bụ nnọọ stratejik nwere anọ nke itoolu ịkpagbu mgbe (warara uzonta), nke ghọrọ isi oké osimiri Lanes nke ụwa ahia na nke ahụ bụ Strait nke Malacca, Sunda Strait, na Strait nke Lombok na Makassar Strait.
Shifting aku na uba na Asia Pacific mpaghara udiozi iwelie olu nke nkesa nke ngwaahịa na Asia-Pacific mpaghara. Nke a na-eme ka mba ndị mepere emepe na-esiwanye ịdabere na Indonesia si stratejik ọnọdụ.
Mgbe Indonesia e kwadebere akụrụngwa na nkesa usoro mempuni N'ezie dependency siri ike aku ga na-esiwanye ike.
Nke a bụ hụrụ Jokowi na Indonesia dị ka a pivot triga Maritime ụwa. Iji mezuo nke a, Indonesia na-achọ ezigbo Maritime akụrụngwa development.
Na-aghọta na-ewu nke Maritime akụrụngwa bụ n'ụzọ doro anya na-achọ ịrịba ego ego. Indonesia kwesịrị ịdị na mba na-ekere òkè na-aghọta na nwere nke Indonesia dị ka ụwa Maritime axis.
N'aka nke ọzọ, na-emi odude ke Asia Pacific mpaghara na dịwo n'ụra soliditasnya ya bụ ASEAN. N'aka nke ọzọ, Indonesia bụ otu n'ime akpa mba na ASEAN mpaghara na nwere ohere na-ewu a ọhụrụ aku ike na Asia Pacific oge.
ASEAN siri ike zaa measurable akụ na ụba nweta na-eyi egwu n'ihi na a dịgasị iche iche nke dị ike ná mba ndị na ụwa. Ya mere, Indonesia nwere ikike ịgawakwa n'ihu na ASEAN ga-ekpebi zụta ike nke Indonesia n'anya nke ụwa.
The ike na zụta ike nke Indonesia, nke ukwuu ohere maka Indonesia na-ekwu okwu na mba òtù.
"The ike na zụta ike nke Indonesia, nke ukwuu ohere maka Indonesia na-ekwu okwu na mba òtù"
Ya mere, mgbe m na-abịa azụ nyochaa nke Trans Pacific Partnership ebe ya inception N'eziokwu-hụrụ dị ka ohere ma ọ bụ ihe iyi egwu.
Ohere maka ịga nke ọma nke anụ ụlọ burukwa pụrụ inweta, kamakwa mkpa nri preconditions.
Indonesia kwesịrị maara na mgbe na-egwuri egwu n'ámá egwuregwu nke wider mpaghara dị ka nke a ga-anọgide na ebe ke ASEAN. ASEAN bụ ihe kasị kwesị ekwesị amalite tupu na-aga ọ bụla n'ihu n'ime Trans Pacific Partnership.
N'ihi na ASEAN na-atụ anya ịbụ "European" nke Asia ga-aku center nke Asia Pacific. On a mata, ma ọ bụrụ na Indonesia chọrọ mụbaa imekọ ihe ọnụ na nke a ka Trans Pacific Partnership, Indonesia kwesịrị nlezianya tụlee ókè nke Indonesia si zụta ọnọdụ na nzukọ.
Anyị na-ahụ Trans Pacific Partnership na-edu United States ebe ọ ghọrọ a guzozie nzọụkwụ n'elu China si mmetụta na Asia Pacific mpaghara.
N'ụzọ ezi uche mgbe Indonesia sonyeere Trans Pacific Partnership na-emeghe ọnụ ụzọ nke imekọ ihe ọnụ na United States na allies.
Ikekwe ahụ bụkwa free na-arụsi ọrụ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-egwuri site President Jokowi. Iji mee ka Indonesia ka axis nke Maritime ụwa, Indonesia ga-enwe ike ịdị na-nnukwu mba.
Otú ọ dị, ọ dị mkpa icheta na anyị na-apụghị ngwa ngwa mee mkpebi iji sonyere ma ọ bụ na nke a Trans Pacific Partnership. N'ihi na nke enweghị doo anya banyere imekọ ihe ọnụ nkwekọrịta dị ka ọ ga-anara.
Ọ dịkarịa ala e nwere ihe abụọ ahụ ga-abụ na burukwa nke Trans Pacific Partnership na deregulation nke bupu-ibubata, nke pụtara mgbasawanye nke ahịa na eruba nke ego mfe.
Mgbe n'ịtụle nwere n'ime Indonesia taa bụ n'ezie ndị kasị mkpa bụ mmepe nke Maritime akụrụngwa.
Mkpebi ma ma ọ bụ isonyere Trans Pacific Partnership ga-dabeere na ike nke Indonesia na ASEAN nakwa dị ka na-akwado mmepe nke Maritime akụrụngwa.
President Joko Widodo mara ọkwa a ngwugwu nke aku na uba atumatu
(BBC) - ngwugwu nke atumatu bu n'obi ịkwaga azụ aku na uba
President Joko Widodo mara ọkwa akụ na ụba iwu ngwugwu na e dere atọ nzọụkwụ ke Presidential Obí on Wednesday (09/09).
Nzọụkwụ nke atọ na-agụnye a agbam ume ka ịsọ mpi nke mba ụlọ ọrụ site deregulation, mmanye iwu na azụmahịa n'aka.
The president kwuru na e nwere 89 iwu overhauled si 154 chọrọ. "Ya mere, nke a nwere ike na-ewusi anọgidesi na bee ụkpụrụ na-egbochi ndị ụlọ ọrụ," ka president.
Nzọụkwụ nke abụọ bụ iji mee ngwangwa National stratejik oru ngo eliminates mkpọchi, ndokwa nke ikike, ẹkụre okirikiri nhọrọ ukwuu, na osooso nke ngwaahịa na ọrụ.
Egbu, president achọ ntọt ego na ihe onwunwe oru.
"The akụ na ụba iwu ngwugwu ga mbo mbuli ata oru. M kweere akpa ogbo nke akụ na ụba iwu ngwugwu ga-eme ka mba ụlọ ọrụ, na-emepe emepe Micro industries, ikwado ofu-mpaghara ahia, akpali njem, rụọ ọdịmma nke ndị ọkụ azụ," ka o kwuru.
The president kwuru na akụ na ụba iwu ngwugwu bụ nke mbụ ngwugwu oru. Nke abụọ ngwugwu, dị ka ịhazi Minister maka Economy, Nasution, a ga-mara ọkwa na nke anọ n'izu September.
Rural aku na uba
N'etiti ọtụtụ ihe a na-akpọ president, e nwere mgbalị ịkpali ime obodo aku na uba site accelerating na mfe ojiji nke obodo ego maka ọrụ-kpụ ọkụ n'ọnụ akụrụngwa development.
Tupu mgbe ahụ, Government Nkwupụta na Draft Iwu na 2016 draft mmefu ego tupu ndị òtù nke MPR / DPR, ikpeazụ August, mmefu ego allocations na-enyefe gaa na mpaghara na obodo nta ga-mma nke mere na ukwuu karịa okodu ministri na ụlọ ọrụ.
Na draft mmefu ego 2016, gọọmenti etiti emefu ga-eru RP 1339,1 puku ijeri, na nkọwa nke emefu ministri na ụlọ ọrụ nweta abụghị Rp780,4 puku ijeri na emefu ministri na ụlọ ọrụ nke Rp558,7 puku ijeri.
Nyefe ka mpaghara na ime obodo ego ruru RP 782, 2 puku ijeri. The enweta ego mejupụtara mpaghara transfer mmefu ego maka Rp735,2 puku ijeri na obodo ego ruru Rp47 puku ijeri.
Infrastructure mmepe na-atụ anya ụgbọala na aku na uba obodo.
Ọdịmma nke ọkụ azụ
Mgbe kwupụtara akụ na ụba iwu ngwugwu, kwukwara banyere nwekwara ọdịmma nke ndị ọkụ azụ. Economic ịhazi Minister Nasution kwuru a ga-enwe iwu nke LPG ọkụ azụ.
Nasution kwuru na ọ bụrụ na a na-akụ azụ na oké osimiri nọrọ 30 lita mmanụ dizel uru Rp207.000, mgbe ahụ, na-eji a Ntụgharị ngwá ọrụ LPG ọkụ azụ ga naanị nke Rp62.100. Nke mere na, mgbe ọ na-akawanye 10kg azụ ọkụ azụ anya isi uru Rp20,000 kwa n'arọ, ọ ga-enweta a uru nke Rp137.900.
"Ọ ga-amụba mmepụta nke azụ na-ejide n'otu oge rụọ ọdịmma nke ndị ọkụ azụ," Nasution kwuru.
Na-atụ anya hapụ a ngwugwu nke akụ na ụba iwu, ọha revenue ga-amụba ịzụta ike sikwuo ike.
Economic iwu ngwugwu olu abụọ mkpụbelata ikikere
Dị ka Bloomberg, na rupiah megide US dollar na Tuesday (09/29) metụrụ Rp14.818 kwa US $ 1.
Indonesian ọchịchị tọhapụrụ abụọ nkebi nke akụ na ụba iwu ngwugwu nwere ọtụtụ nke jikoro iji dozie ndị na-egbochi ego na ikikere.
Jikoro e kwupụtara dị na n'ógbè nke ọrụ a ọnụ ọgụgụ nke ministri, gụnyere Ministry of Environment na oké ọhịa na Ministry of Finance on Tuesday (29/09).
Na Ministry of Environment na oké ọhịa, ka ihe atụ, Minister Siti Nurbaya ekwu ga-eme ka anọ ayakde itinye n'ọrụ nke osisi n'ime oké ọhịa mmepụta n'ime a ikike aha ya bụ "osisi Itinye n'ọrụ Kwere '.
Mgbe e mesịrị na n'ógbè ndị Ministry nke Finance, Minista Bambang Brodjonegoro kwuru ga-enye tax ịkpali exporters nke okooko osisi ndị na-edebe bupu retara (.Cute) na anoghi n'ulo oba na mba ruo ogologo oge.
Ẹkedori akụ na ụba ngwugwu abịa gburugburu a dobe na ebuka na ọnụego mgbanwe.
Dị ka ịhazi Minister maka Economy Nasution, iwu ngwugwu olu abụọ a lekwasịrị anya na mma na gbasara ego obodo ụlọ ọrụ na-agba ume eruba nke ego n'ime Indonesia.
"Anyị adịghị mkpa a otutu ugbu a, nke dị mkpa igba. One igba na ngwa ngwa ọrụ ego," Nasution kwuru.
Cabinet Secretary Pramono Agung kwuru na gọọmenti etiti ga-ezikwa ndị ọchịchị obodo na-ebelata usoro nke ime ka a azụmahịa ikike.
"Ihe a nile bụ inye a nti mgbaàmà na obodo na mba ndị agbata obi na Indonesian enyi na onye ọ bụla chọrọ itinye ego na Indonesia," wee sị Pramono.
Nkebi abụọ nke iwu ngwugwu e nyere izu atọ mgbe mbụ iwu ngwugwu e wepụtara na September 9 ikpeazụ.
Mbụ ngwugwu agụnye a agbam ume ka ịsọ mpi nke mba ụlọ ọrụ site deregulation, mmanye iwu na azụmahịa n'aka.
Ngwugwu abịa gburugburu ike gwụ nke rupiah. Dị ka Bloomberg, na rupiah megide US dollar na Tuesday (09/29) metụrụ Rp14.818 kwa US $ 1.
Ihe atọ banyere akụ na ụba ngwugwu mpịakọta 3
Jokowi ọchịchị mara ọkwa akụ na ụba ngwugwu olu 3. Olee ọdịnaya nke ngwugwu bụ zuru ezu?
Cabinet Secretary Pramono Agung napụtara ndị mmeghe mara ọkwa Aku N'uba ngwugwu III, na Presidential Office, Jakarta, October 7
Jakarta, Indonesia - The akụ na ụba otu nke President Joko "Jokowi" Widodo mara ọkwa akụ na ụba ngwugwu mpịakọta 3, Wednesday, October 7th. Ozi-ewusi ịsọ mpi nke azụmahịa ụwa n'etiti nsogbu akụ na ụba.
"Anyị kweere nke atọ a larịị iwu ngwugwu 'igba'. Ọkụ anyị na-eche taa, ebe rupiah emeela ka budata, "wee sị Chief Cabinet Secretary Pramono Agung Wibowo, na State Obí on Wednesday n'ehihie.
Economic ịhazi Minister Nasution kwukwara na-atọ olu nke ngwugwu a dịghị ike Lower ụlọ ọrụ si akwụ ụgwọ.
Ebe a, ihe atọ dị mkpa metụtara akụ na ụba ngwugwu.
A ọnụ na price nke manu mmanụ (BBM), gas, na ọkụ eletrik
The price nke Aviation mmanụ ụgbọala, mmanụ petrol gasị (LPG) 12 kilograms, Pertamax na irè Pertalite ala ebe ọ bụ na October 1, 2015.
The price nke mmanụ dizel e belata RP 200 kwa liter, otú ahụ ọnụahịa mkpọsa nke subsidized mmanụ dizel ụdị ga-RP 6.700 kwa liter.
A ọnụ ke price nke mmanụ dizel ga-emetụta na mmanụ ụgbọala ụdị nke na-abụghị subsidized dizel.
Fuel price adịchaghị-anọgide na RP 7.400 kwa liter (Java, Madura, Bali) na RP 7,300 (n'èzí nke Java, Madura, Bali). Ọhụrụ price bụ nti si October ka December 2015.
Gas ahịa. The price maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe si ọhụrụ gas ubi na-setịpụrụ dị na ịzụta ike nke fatịlaịza ụlọ ọrụ, nke iri na US $ 7 MMBtu (nde British Thermal Units). Ezie na price nke gas maka ndị ọzọ ọrụ (dị ka Petrochemical, ceramik, wdg) ga-belatara dị na ike nke ha na nwoke ọrụ.
Gas price Mbelata ahụ kwe omume site arụmọrụ nke gas nkesa usoro nakwa dị ka a Mbelata na ala revenue, ma ọ bụ Non-Tax ụtụ (na-abụghị tax) gas.
Ma, ndị ọchịchị na-atụle ojuju na gas ahịa ga-emetụta ego nke ụtụ ndị na-aghọ akụkụ nke gas ụlọ ọrụ Cooperation nkwekọrịta. A ọnụ ke price nke gas maka ụlọ ọrụ ga-adị irè January 1, 2016.
Electricity price. Electricity udu maka ulo oru ahịa I3 na I4 ga ibelata site USD 12 - USD 13 kwa kWh esonụ dobe ke mmanụ ahịa (Automatic tarifu ukpụhọde). Ego ọnụego ga-nyere ruo pasent 30 nke ọkụ eletrik oriri n'etiti abalị (23:00) rue mgbe ụtụtụ (08:00), mgbe na ọkụ eletrik usoro ibu bụ ala.
Government ịkpali oge na ugwo nke ụgwọ ọkụ site ruo pasent 40 nke ndị ụgwọ ọkụ akpa 6 ma ọ bụ 10 ọnwa, na ndị ụlọ ọrụ nwere ike ịkwụ ụgwọ ya anya nwayọọ nwayọọ. A na-emetụta kpọmkwem na-na ọrụ-kpụ ọkụ n'ọnụ industries nakwa dị ka ulo oru ịsọ mpi ahụ adịghị ike.
Mmụba erite oru buu igba n'ulo Ndị mmadụ Business Ebe E Si Nweta (KUR)
Iji melite ohere nke oru buu igba n'ulo ka akụ Ebe E Si Nweta, site na KUR omume, govamenti budara ihe mmasị ọnụego KUR si banyere 22 percent 12 percent.
Ke ngwugwu nke a iwu, ezinụlọ ndị nwere otu ebe ego, pụrụ inweta KUR maka arụpụta azụmahịa oru.
Na a iwu, anoghi n'ulo oba KUR chụpụrụ pro-arụsi ọrụ ike mgbalị na-enye onye na-eche, nke mere na ga-amụba sonyere KUR mgbe na-agba ume uto nke ọhụrụ oru buu igba n'ulo.
Simplification nke ala nwechapụ ke ukeme eme
N'ala oru, ndị Ministry nke Agricultural na gbasara ohere Planning / National Land Agency, revising Regulation Nke 2 2015 na Service Standards and Regulations Agricultural, gbasara ohere na Land na Investment Ọrụ.
Ụfọdụ bekee ndokwa ọhụrụ na-agụnye ihe ndị dị ka:
a. Ocho oru nweta ihe ọmụma banyere nnweta ala (mbụ 7 ụbọchị 3 awa);
b. Arịrịọ niile na-aha dị ka ụdị nke n'aka maka ịbata nke nnweta na ala eji atụmatụ. Akwụkwọ ozi bipụtara n'ime 3 awa.
c. Izu ezu nke ikikere ụkpụrụ e nyere na ụdị, ndọ, na oruru nke ụlọ ọrụ, n'elu ala ikike ịbụ a mkpa iji malitere ubi-eme. E nwere ihe a chọrọ na ike ga-soro na tupu issuance nke Iwu na Land Use Rights.
d. Mmezi oge (chọrọ kwesịrị-ezu ezu):
Hak Guna Usaha: si 30-90 ụbọchị 20 na-arụ ọrụ ụbọchị (ruo 200 hectare), ma ọ 45 na-arụ ọrụ ụbọchị (> 200 hectare)
Extension / Renewal HGU: si 20-50 ụbọchị 7-arụ ọrụ ụbọchị (ruo 200 hectare), ma ọ bụ 14 na-arụ ọrụ ụbọchị (> 200 hectare)
Arịrịọ Broking / Right Jiri: si 20-50-arụ ọrụ ụbọchị 20 na-arụ ọrụ ụbọchị (ruo 15 hectare) ma ọ bụ 30 na-arụ ọrụ ụbọchị (> 15 hectare)
Extension / Renewal Broking / Right Jiri: si 20-50-arụ ọrụ ụbọchị 5-arụ ọrụ ụbọchị (ruo 15 hectare) ma ọ bụ 7-arụ ọrụ ụbọchị (> 15 hectare)
Land Rights: 5-arụ ọrụ ụbọchị 1 na-arụ ọrụ ụbọchị
Mmezi nke mkpesa: 5-arụ ọrụ ụbọchị 2-arụ ọrụ ụbọchị
e. Na ndọtị nke ala eji ikike dabeere nwale nke management na ojiji nke ala (gụnyere sara oditi) site mkpa ala agaghịkwa eji dị ka ndị mbụ aririọ chọrọ.
Senior Deputy Gọvanọ nke Bank Indonesia Adityaswara Mirza kwuru na nke ugbu a ego ahịa ọnọdụ mma ruru mpụga na esịtidem ihe.
Mpụga ihe, Mirza kwuru na ọnụ ọgụgụ nke United States na aku na uba na-enwe a bit nke adịghị ike, karịsịa na ọrụ oru. The ọzọ ihe bụ n'ihi nke a ịrị elu na mmasị ọnụego na-amalite ịgbanwee. "Ná mmalite ọtụtụ ahịa sonyere ịkọ a nri mmasị ọnụego ịrị elu na October ma ọ bụ December ma o yiri gbanwere ya amụma na nkeji iri na ise 1st ma ọ bụ 2nd n'afọ ọzọ," wee sị Mirza.
Nke a nnofega dugara ukpụhọde, nke mere na speculators onye ọnwa ụfọdụ tupu mgbe ahụ zụtara dollar na mbụ, bụ ugbu a bee losses.
Iji esịtidem ihe, ahịa nabatakwara ka iwu ngwugwu kkonomi mbụ, nke abụọ, na nke atọ. Ndị a nchịkọta na-egosi na ọchịchị nkwa na akụ na ụba mgbanwe.
"Na ogologo okwu, iwu ngwugwu na ga-enwe ike iji belata onu oriri," wee sị Mirza.
The Government ulo oru nke-anọ akụ na ụba iwu ngwugwu
Welfare ndị ọrụ na-na-elekwasị anya nke iwu ngwugwu oge a
Jakarta, Indonesia - The ọchịchị ulo oru a ngwugwu nke anọ mpịakọta nke akụ na ụba iwu on Thursday, October 15, 2015. The isi-elekwasị anya na iwu ngwugwu oge a bụ ọdịmma nke ọrụ na mmepe nke Micro, obere na-ajụ Enterprises (SMEs).
Iji hụ na ọdịmma nke ọrụ, ndị ọchịchị ga-mejuputa a ọhụrụ usoro gbakọọ ego nke Provincial Opekempe Lụso (UMP)
"The ala dị iji hụ na ndị ọrụ ghara ịda ke ala ụgwọ, ma ọrụ nwekwara ihe mmesi obi ike," wee sị ịhazi Minister maka Economy Nasution ya pịa ogbako.
Dị ka na-emepe emepe na SME oru, pemerintahkan azụ chọrọ nkesa atụmatụ iji zuru ike Ndị Mmadụ Business Ebe E Si Nweta (KUR) na-enye na-arụ ọrụ isi obodo mgbazinye ego iji SMEs bupu ngwongwo na-emepụta.
Ebe a bụ ụfọdụ ihe na-anọ akụ na ụba iwu ngwugwu dị ka n'ihu site Nasution, Minista Labour na Minister nke Finance Hanif Dhakiri Bambang Brodjonegoro,
Ịhazi Minister maka Economic Nasution:
1. ụgwọ-ọrụ nke ọrụ-agbagokwa kwa afọ.
2. The State dị aka ọrụ belata ibu arọ nke na-eri nke ndụ ya na a nchekwa net n'ụdị nke issuance nke Indonesia Smart Kaadị na Kaadị Healthy Indonesia.
3. Formula UMP: Opekempe ụgwọ ọrụ afọ a gbakwunyere ọnụego nke onu oriri na aku n'uba (na pasent). Nke a usoro na-adịghị emetụta na asatọ anāchi achi na ugbu a opekempe ụgwọ bụ ka n'okpuru ndị dị ndụ Mkpa (KHL).
N'ihi na asatọ nke ógbè, ga-nyere a mepere oge nke afọ anọ. Ruo afọ anọ, ndị opekempe ụgwọ e ga-enweta ihe ndị ọzọ increment iji chefuo oke na a uru nke KHL
1. Evaluation nke Ibi Mkpa (KHL) ga-rụrụ ise ọ bụla afọ. Nke a bụ n'ihi dị ka otu nnyocha e mere na Central Bureau nke Statistics (BPS), mgbanwe oriri nakawa etu esi mere ise ọ bụla afọ.
2. Ke n'ọdịnihu, ọ dịghị ọrụ maka ụlọ ọrụ guzosie Ọdịdị na ọnụ ọgụgụ nke ụgwọ ọrụ. Ọ pụtara na ụgwọ ọrụ a ga-atụle n'etiti na-arụ ọrụ afọ, amaka, agụmakwụkwọ, nweta na arụmọrụ. Ọ ga-an'Iwu na ụkpụrụ ya.
1. njikọ na-arụ ọrụ isi obodo mgbazinye ego iji SMEs bupu ngwongwo emepụta, Indonesian Exports Financing Agency (LPEI) mere nkewa. The N'ihi na e nwere 30 ụlọ ọrụ ndị na nwere ike inweta na-arụ ọrụ isi obodo mgbazinye ego.
Tax ịkpali Ya mere Focus Aku N'uba ngwugwu Mpịakọta V
Ngwugwu nke ọchịchị akụ na ụba iwu ga-anọgide na-ewusi akụ na ụba kwụsie ike gburugburu ụwa akụ na ụba slump nke na-emetụta Indonesia, Abasi ọdọhọ President Joko Widodo kwuru mgbe a mmachi kabinet nzukọ on Thursday n'ehihie (22/10).
Nasution Minister maka Economic Affairs na President si ọrụ mara ọkwa a ngwugwu nke aku na uba atumatu vol 5, na Jakarta Thursday, October 22, 2015 (VOA / Andylala).
Aku N'uba ngwugwu 4 Focus Nsogbu ụgwọ ọrụ ma na Ndị mmadụ Business Ebe E Si Nweta
The ọchịchị nyere a ise-olu akụ na ụba iwu ngwugwu mbo mbuli anụ ụlọ aku na uba. N'uba ngwugwu na-elekwasị anya na ọchịchị ịkpali metụtara Mbelata ụtụ isi.
Minister maka Economic Affairs Nasution na president ụlọ ọrụ dị na Jakarta on Thursday (22/10) kwuru mbụ iwu bụ otu okwu nke tax enyemaka ịkpali na revaluation nke ụlọ ọrụ akụ, ma na State Nwe Enwe Enterprises (SOEs) na onwe ọzọ. Nasution kwuru n'oge ụlọ ọrụ na-adịghị achọ ime revaluation nke akụ n'ihi na tax ọnụego bụ elu nke ọma. Ọ si, ma ọ bụrụ na akpan owo revaluation a mere, akpan akpan n'ihi onwunwe akụ, ọ pụrụ ime ka uru nke akụ nke ụlọ ọrụ ụba.
"Ọ bụrụ na ha na-eme revaluation mgbe ahụ, ọ ga-amụba ha ikike. Ọ ga-ike ike na ego na arụmọrụ mụbara site na a ịrịba ego. N'ezie ọ bụ na mgbe e mesịrị afọ nwere ike ime ka a ibu uru. Total akụ ga-amụba. Gwa 100%, ma ọ bụ 200 %, ọ pụrụ ịbụ ihe, "wee sị Nasution.
Otu ihe e ekekpepde site Minister nke Finance Bambang Brodjonegoro, na-ekwu na revaluation bụ a ịgbazigharị nke bara uru nke ụlọ ọrụ si akụ dị na nke ugbu a ngosi uru. Bambang kọwara, a na ego ụtụ isi (VAT) maka nzube nke revaluation nke akụ pegged 10 percent, ma ọnụego bee a ụfọdụ oge.
"N'ihi na taxpayers (WP), mgbe ịgba akwụkwọ na revaluation nke akụ ruo mgbe December 31, 2015 ego nke pụrụ iche n'ego ụgbọ ikpeazụ ego ụtụ isi revaluation bụ site nkịtị 10% 3%. Ọ bụrụ na osụk na oge January 1st ka June 30th 2016, ego nke-ndebe bụ 4%. Mgbe ịgba akwụkwọ July 1 ruo mgbe December 31, 2016, ndị ikpeazụ ego nke ọnụego pụrụ iche nke ego ụtụ isi ka 6% revaluation, "wee sị Bambang.
N'ihi na nke abụọ iwu na ngwugwu olu 5 bụ mkpochapu abụọ ụtụ isi maka mkpokọta ego nkwekọrịta nke ezigbo ala na ụlọ ego ego ma ọ bụ akpọkarị REITs (Real Estate Investment Trust). Dị ka Bambang agụnye nkịtị ala nyere site ụlọ ọrụ na ịgbapụta ma ọ bụ na-apụtaghị ìhè akụ dị ka onwunwe ma ọ bụ akụrụngwa.
Bambang kwukwara, "Site na PMK na anyị ga-adịghị anya na-eji na-esonụ n'izu, mgbe ahụ, abụọ ụtụ isi, karịsịa n'ihi na ụlọ ọrụ na a pụrụ iche nzube akandihilangkan-abụ otu tax. N'ihi ya, ọ na-atụ anya ọnụnọ nke a ngwá Kik juru nwere ike ịpụta na Indonesian isi obodo ahịa, na-adọta ego maka E mere nke a ná mba ọzọ. "
Ka ọ dịgodị, Financial Services Authority (FSA) nakwa agbala a ọhụrụ iwu na a lekwasịrị anya na islam ichekwa ego na bank. Onyeisi oche nke Board nke Commissioners FSA, Muliaman D. Hadad, ọhụrụ iwu dị mkpa n'ihi na anọ gara aga iwu ngwugwu tọhapụrụ site FSA, Bank Indonesia (bi), na ndị ọchịchị nwere ma na-iru dum ego oru.
Dị ka Hedad, na iwu Sharia ụlọ ọrụ ọ bụghị natara a òkè.
"Nke mbụ, bụ ala nke ngwaahịa na-eme ihe nke Islam obot. The usoro nke ikikere na mmefu islam ngwaahịa ga-adị mfe. Na disederahanakan, mgbe ahụ, ọ dịghị mkpa ịjụ ikike ga-ahapụ a akwụkwọ ozi n'ihi Sharia ngwaahịa ga-codified na a akwụkwọ. Ọ bụrụ na ngwaahịa ama adị, ọ dịghị mkpa ikike ọzọ, dị nnọọ akọ ya, "ka o kwuru.
Ikikere usoro ndị ọzọ na ngwaahịa gụnyere ke akporo iwu Sharia n'ihu Hedad, na-agụnye gold pawn iwu Sharia, nke nwekwara adịghị mkpa ịjụ ikike.
Na a pịa ogbako gara site ọtụtụ ozi, gụnyere Minister maka Economic Affairs Nasution, ịhazi Minister maka Maritime Rizal Ramli, Gọvanọ nke Bank Indonesia Agus Martowardojo, Finance Minister Bambang Brodjonegoro na onyeisi oche nke Financial Services Authority FSA Hadad Hedad bụ - President Joko Widodo kwuru na ọchịchị ga-eme ihe niile kwere omume ike akụ na ụba kwụsie ike gburugburu ụwa akụ na ụba slump nke na-emetụta Indonesia.
The President ana achi achi gọọmenti akụ na ụba iwu ngwugwu ga-anọgide na.
"Ya mere, na ngwugwu ga-anọgide na n'ihu na Bank Indonesia nwekwara na FSA. Site 1,2,3,4,5 ga-nọgidere na-na 6,7,8 ma eleghị anya ruo 100. Ma eleghị anya, ruo 300 umpteenth 200. ma eleghị anya. Ma doro anya, anọgidesi nke oge anyị na-chọrọ inye a ike echiche na anyị ebumnuche gbanwee fundamentals nke mba aku na uba. nke N'ezie, anyị chọrọ ka ọha na eze na ulo oru mara na anyị ga-anọgide na-arụ ọrụ mereform ụkpụrụ na bureaucratization, "ka President. (VOA)
Isii akụ na ụba ngwugwu maka 'esịt'
Special Economic Ikpehe na-atụ anya ịtụte aku na uba na ime obodo.
Isii nkebi nke akụ na ụba iwu ngwugwu, n'etiti ndị ọzọ, na-eduzi ihe ná mgbalị ịkwaga aku na uba na a esịt, kwuru, sị Minister maka Economic Affairs Nasution.
Ke adianade do, ịhazi Minister (ịhazi) Economic Affairs Nasution kwuru akụ na ụba iwu ngwugwu oge a na-elekwasị anya na ụtụ isi, mmiri akụ management, na ọgwụ.
"Nanị tinye, site na nke a ngwugwu, e nwere ụfọdụ ebe ke ebe kpebisiri ike Special Economic Mpaghara (SEZ), onye isi nzube ya bụ iji hazie ẹdude ego na mpaghara na karịrị," wee sị Nasution na n'ọfịs ya, Thursday (5/11) ,
Special akụ na ụba zones
Sei Mangke na Tanjung API-API (North Sumatra)
Ugbu a, ndị asatọ akụ na ụba zones guzosie ike site ọchịchị ụkpụrụ n'ime kpọmkwem ebe na a ga-mepụtara, ya bụ Tanjung Lesung na Banten anāchi achi, Sei Mangke na Tanjung API-API (North Sumatra), Palu (Central Sulawesi), Bitung (North Sulawesi), Mandalika ( West Nusa Tenggara), Morotai (North Maluku), na Maloy Batuta Trans Kalimantan (Kalimantan Barat).
Pụrụ iche akụ na ụba zones na na-nyere dị iche iche ụlọ ọrụ nke tax ịkpali, karịsịa industries na hazie obodo ego gburugburu KEK na izute kpọmkwem chọrọ.
"Nke a bụ na-agba ume itinye n'ọnọdụ nke azụmahịa na ụlọ ọrụ idụhe bụ ihe ọma," Nasution kwuru.
Nasution kwuru na iwu a oge na-agụnye management nke mmiri na ego nakwa dị ka nri na ọgwụ metụtara ihe na-edozi BPOM.
Ndị ọchịchị nke President Jokowi ruo ugbu a ka ulo oru a ngwugwu nke isii akụ na ụba iwu.
Na oha nke mmiri na ego, ndị ọchịchị na-n'ime ya iwu na a Iwu Court mkpebi na-adịghị ekwe ka azụmahịa management nke mmiri na ego site onwe oru.
Otú ọ dị, mgbe mkpebi nke Ụlọikpe ala, ndị ọchịchị nyere ikike ka a dịgasị iche iche nke ụlọ ọrụ, ọ bụghị naanị bottled mmiri ụlọ ọrụ.
Ya mere, kwuru, sị Nasution, na ụlọ ọrụ ndị ga-anọgide na-arụ ọrụ dị ikikere "ruo mgbe ikike expires ma ọ bụ ruo mgbe e nwere ọhụrụ iwu".
Banyere ihe oriri na ịṅụ ọgwụ ụkpụrụ, Nasution ekpughe ọgwụ ibubata ikike simplification.
Nke a bụ ngwugwu nke isii akụ na ụba atumatu emejuputa atumatu site ọchịchị ebe ọ bụ na President Jokowi eme prombakan kabinet.
Diiluncurkan mbụ oge, Nasution kwuru na ngwugwu nke aku na uba mgbanwe dị mkpa iji ụgbọala azụ aku na uba na-slowing.
Agro commodities 5 Indonesia n'ụwa nile
Anyị kwesịrị ịdị mpako amama ụfọdụ ugbo ngwaahịa na ọkpọ Indonesia bụ nnọọ global. Gburugburu nke ugbu a ejupụta nke bubata nke n'ji ngwongwo si esenidụt, oru ubi na ọkpọ commodities bụ ka a nnweta na mba arena. Nke a na oge anyị ga-atụle a nta banyere 5 Indonesian ugbo na ọkpọ commodities n'ụwa nile.
Indonesia-etinye onwe m dị ka a na-emeputa nke crude nkwụ mmanụ na ụwa. Na 2011 Indonesia achịkwa ụwa ahịa nke crude nkwụ mmanụ site 47% na ịka Malaysia na 2nd ebe 39%. Exports nke nkwụ mmanụ pụrụ-eme mba mba ọzọ mgbanwe nke USD 14 ijeri na 2010 na-atụ anya na-amụba budata site n'afọ ketahunnya.
2. Ngwa nri
Ebe ọ bụ na oge immemorial, Indonesia bụ ama n'ihi na ya ngwa nri. Ose osisi na-eto nke ọma na Indonesia na-adọta ka ndị mba ọzọ menguasainnya. Ọ bụ-apụghị izere ezere na n'oge gara aga ọtụtụ mba ọzọ bara ọgaranya dị ka a n'ihi nke ngwa nri si Indonesia, nke nwere nnọọ elu uru. Ruo ugbu a, Indonesia bụ isi ekspootu nke ngwa nri n'ụwa, gụnyere nutmeg (ọ dịghị. 1), cinnamon (ọ dịghị. 1), cloves (enweghị 1) na ose (ọ dịghị. 2).
Indonesia bụ Nke 3 na ụwa koko mgbe Ivory Coast na Ghana. Production na-aga n'ihu na-eto eto na nkezi 3.5% kwa afọ, site 2014 ndị ọchịchị e mere ka ndikan mba abụọ na nke mbụ n'usoro dị ka ndị kasị ibu n'ụwa koko emeputa ihe. Na 2010 Indonesian koko mmepụta ruru 574 puku tọn, gua 16% nke ụwa koko mmepụta, mgbe Ivory Coast ke akpa n'usoro na 1.6 nde tọn, gua 44%.
Indonesia kwubara abụọ mgbe Thailand dị ka a soplaya nke crude roba. E nwere banyere Indonesia dị ka chịngọm Arabic ụwa. N'agbanyeghị adịkwa na okwu nke ọnụ ọgụgụ na arụpụtaghị ihe nke roba n'ugbo, ma Indonesian roba touted dị ka a àgwà mmeri n'elu roba si Thailand. Na 2011, roba mmepụta ke Indonesia ruru 2.8 nde tọn.
Indonesia ugbu a kwubara atọ dị ka a ụwa kọfị na-emeputa n'okpuru Brazil na Colombia. Basarnya Indonesia si kọfị mmepụta kwa afọ na nkezi banyere 600 puku tọn. Site na nke a ọnụ ọgụgụ Indonesia ike ezitekwara 7% nke ụwa kọfị.
Ịmịpụta ide Exchange
Menpar kwuru Indonesia elu na okwu nke njem nleta na ebe, ego nke asọmpi njem na njem na-ebute ụzọ.
Indonesia Ya mere, ndị ide njem oru emepụta DevisaGili Lawa Dalat, Lombok, Indonesia (Michele Westmorland / CORBIS)
Tourism Minister Arief Yahya kwuru na ọchịchị re-guzosie ike njem dị ka isi oru, na a na-eduga oru maka mba ọzọ mgbanwe earner Indonesia.
Ọ na-atọrọ na a pụrụ iche mechiri emechi nzukọ nke njem Bogor Presidential Obí, on Monday (16/2), na adade ke oghere nke National Conference nke Association nke Indonesian Hotels ụlọ oriri na ọṅụṅụ, Tuesday (17/2).
"The mmetụta nke ndị dị otú ahụ na mkpebi siri ike, mgbe mpaghara e debere na-a mba stratejik ebe, ngalaba ulo oru ga-akwado a atụmatụ na ihe atụ ndị Ministry nke Public Works ga idozi ụzọ," ka o kwuru.
O kwukwara na Indonesia n'ezie nwere uru na okwu nke njem nleta na ebe, ego nke asọmpi njem na njem na-ebute ụzọ.
Mgbe na aka nke ọzọ, Ariel mara site na data Njem na Tourism Mpi Index weere na Ụwa Economic Forum, Indonesia bụ na n'usoro 70 nke 140 mba.
"Anyị ga-idozi erughị eru nke njem dị ka njem akụrụngwa, ọmụma nkà na ụzụ na njem, na ịdị ọcha" O kwukwara.
Nke a, o kwukwara,, na-na nnukwu ihe ịma aka. Ọ na-ele anya Indonesian njem ga-eto n'ike n'ike ma na-a ide ụlọ ọrụ nke Indonesia na mgbakwunye na mmanụ, gas, na mmanụ nkwụ.
TKI Kere Òkè State Foreign Exchange mgbe nke abụọ kasị ukwuu Mmanụ na Gas
mba ọzọ mgbanwe ewepụtara Indonesian Ọrụ (TKI) ka kwubara abụọ naanị ka mmanụ na gas oru (mmanụ na gas).
Ke 2009 naanị mba ọzọ ná mba ọzọ na-arụ ọrụ site nnyefe nke remittances ka mba ruru US $ 6,617 ijeri.
"Ná mba ọzọ na-arụ ọrụ na-eme ka mba ọzọ mgbanwe abụọ kasị ukwuu mgbe mmanụ na gas," wee sị onyeisi oche nke Oge Mgbanwe (ubọk) Chamber Azụmahịa na Industry (Kadin) Adi Putra Tahir na National-edebe semina maka ịkọwa ọnyịnye na Nchedo nke Ọrụ ná mba ọzọ, na Bidakara Hotel, Jakarta, Wednesday (2/6).
O kwuru, sị iwu ọnyịnye na nchebe nke Indonesian Ọrụ (TKI) bụ ka ezigbo. O wee sị revamping nsogbu nke pụrụ isi chọta na nchebe nke mba ọrụ ga-ọma-haziri mba ije na Synergy.
"M na-atụ anya na nke a a mba ije, mma n'anya, nketa oke ga na-eje ije synergistic. Mkpa pụrụ iche uche n'ọrụ, a pụrụ isi chọta, na ọbụna nchebe, "wee sị Adi.
Dị ka Adi, ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ na-arụ ọrụ ná mba ọzọ pụrụ-adịghị iche na ọrụ site ọchịchị ka na-ejedebeghị. Ọnụego nke aku n'uba-eme atụmatụ na 6% bụ ka weliri nnweta ọrụ ná mba ahụ.
Dabere na data si Ministry nke Ọzọ Affairs nke ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ bụ ndị na-arụ ọrụ ná mba ọzọ ruru 3,246 nde mmadụ gbasaa gafee ọtụtụ mba. Of na ego site 2009 ikpe nke nsogbu ná mba ọzọ na-arụ ọrụ ruru 69 004 ndị mmadụ.
Indonesia nwere ike itinye mba ọzọ ọrụ (TKI) 10 nde mmadụ, ma ọ bụ banyere ise percent nke ndị bi.
Nke a nọ na-ekpughe site onyeisi oche nke Dịwara Kọmitii na Employment nke Ọzọ Affairs nke Chamber nke Commerce, Nurfaizi, na a edebe semina maka na mba ọrụ haziri site Chamber nke Commerce na Jakarta, Wednesday (2/6).
Nurfaizi onye bụkwa onyeisi oche nke Association nke Corporate Services TKI (APJATI) e jiri ya tụnyere ihe Philippines, nke na-etinye pasent 10 nke ndị bi na-arụ ọrụ ná mba ọzọ.
"The results, na Philippines raked agbanweta ruo 15 ijeri dollar kwa afọ ma na-ndị kasị ibu na-emeputa nke dum mba ọzọ mgbanwe site Philippine ọchịchị," ka o kwuru.
N'ime afọ ise, ọ si, ọnyịnye nke mba ọrụ ruru nde mmadụ anọ na-ezubere iche ga-amụba ruo nde mmadụ anọ na-esonụ afọ abụọ.
"Nke ahụ bụ mgbe akwado site na niile ọzọ na-agbanwe agbanwe ọchịchị nkwa," ka o kwuru.
Amụba ọnụ ọgụgụ nke mba ọrụ na uto nke 21 percent kwa afọ Malite site 2004, nke iri na 380 690 ndị mmadụ n'ime 696 743 ndị na 2007 na ebe mba Middle East na Asia Pacific.
Nurfaizi kwuru pụrụ isi chọta nke mba ọrụ na n'ịgba oru ka na-adịkwaghị 78 percent, mgbe placements maka Asia Pacific na mpaghara na iwu oru pụrụ iru 52 percent na-adịbeghị anya.
Ke ofụri ofụri, ọ na-ekwu, e nwere ihe ọtụtụ mba ndị ọrụ na-na-abụghị nanị hụrụ ka a ịga nke ọma nke TKI pụrụ isi chọta omume, kamakwa ọtụtụ ọrụ ahụ bụ proportional ka nnweta nke ọrụ na mba.
N'ihota data Kemnakertrans, Director General nke Protocol na Consular Affairs nke Ozi nke Foreign Affairs, Lutfi Rauf, kwuru na e nwere 2.8 nde ná mba ọzọ na-arụ ọrụ na oge nke 2005-2009 na a "onyinye" (remittances nke mba ọrụ n'ime obodo) ruru 6617 US dollar na 2009 ka 69 004 ná mba ọzọ na-arụ ọrụ mfịna n'oge 2009.
N'afọ 2009, ndị mba ọzọ Ministry na nchikota na Indonesian anọchitekwa anya ọma chọ mmezu nke isi ikike nke ndị ọrụ na-na-enwe nsogbu ná mba ọzọ na ruuru nke anakọtara ruru 326 495 438 750 US dollar na Singapore dollar.
Na January-May 2010, ndị mba ọzọ Ministry na Indonesian anọchitekwa anya ọma facilitated mmezu nke isi ikike nke mba ndị ọrụ dị ukwuu dị ka 156 416 dollar, Rp185.736.941, United Arab Emirates dirham 1,845, 4,800 riyals na 140,000 Singapore dollar.
N'ihi na ikpe nke mba ndị ọrụ na-agụnye-adịghị akwụ ụgwọ ụgwọ ọrụ, iyi egwu mmekọahụ, na-akwụ ụgwọ ala ụgwọ ọnwa, maltreatment, gburu, ọrụ, ihe mberede, "ahia mgbere" (ahia mgbere), mbata na ọpụpụ imebi, na na.
Lutfi kwuru ihe mgbochi ndị ha okosobode ke nchedo nke nwa amaala, n'etiti ndị ọzọ, na-abụghị nnabata na iwu na ụkpụrụ, Gọọmenti nke Indonesia adịghị nwere bilateral nkwekọrịta na mba niile nke mba ọrụ, na-eziga iwu na-akwadoghị mba ọrụ, na-arụ ọrụ ndị na-adịghị eru.
Minista mba Marty Natalegawa na a-anụ na Commission m nke Ụlọ-anọchitekwa anya na December 2nd, 2009 kwuru na nke nke nchebe nke Indonesian ụmụ amaala mba ọzọ bụ a mkpa mba ọzọ Ministry.
Indonesian aku na uba ranking 9 nke Ụwa
Mediawarga.info - The World Bank kwubara Indonesia ka 9 kasị aku na uba na ụwa. Indonesia si GDP site na njedebe nke 2014 ruru US $ 2.55 puku ijeri. A ọnọdụ ịgbanwee na UK GDP bụ naanị US $ 2.4 puku ijeri.
The uru akụ na ụba na gbakọọ ka n'ihi nke a tụnyere nke ịzụta ike nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ a na obodo ụdị nke ngwongwo ma ọ bụ ọrụ site na iji otu Ego na US dollar. Nke a na okwu a maara dị ka ịzụta ike parity (PPP). Ka ihe atụ, The Economist iji na ngụkọta oge usoro dabeere na price nke McDonald, maara dị ka "The Big Mac index".
DBS Bank Economist, Gundy Cahyadi kwuru na center nke ụwa aku na uba na ugbu a shifting si America na Europe ka Asia. Asia si na-enwe ọganihu ghara echiche ahụ bụ na US aku ka ụwa kasị ukwuu ike na-akpali global ibu. Dị ka nnyocha pụta DBS, n'ọdịnihu, Asia ga-ike hà akụ na ụba ibu Germany ọ bụla afọ atọ. Mbụ ọhụrụ aku ibu na-atụ anya ga-eme 2023, nke abụọ na 2031 na nke atọ na 2038.
RI akụ na ụba ga-akarị Australia na South Korea na 2030
Liputan6.com, Jakarta - Economics United States (US) buru amụma nọgidere na-egosi ya dominance na 2030. Ka ọ dịgodị, onodu aku na uba nke ụfọdụ mba na emepe emepe na-atụ anya na-enweta a anya ebe ụfọdụ mba Europe ga-ileghara n'ime ala iji.
Dị ka US Department nke Agriculture, n'ala Deede Sam na-atụ anya ịnọgide na-onye ndú nke n'ụwa aku na uba ya oké njọ anụ ụlọ ngwaahịa (GDP) na-esonụ afọ 15 na-atụghị iru US $ 24,8 puku ijeri, na-abawanye nke US $ 8 puku ijeri tụnyere amụma nke GDP na afọ a US $ 16 8 puku ijeri.
Ka ọ dịgodị, na nke abụọ ọnọdụ nwere site China ya GDP ga-eto ugboro abụọ na amụma afọ a na-US $ 22,2 ijeri na-enyere emechi akụ na ụba ọdịiche dị n'etiti ndị US na Asia ke ofụri ofụri.
Atọ ebe na-nwere site India na-buru amụma na na 2015 nanị okokụre ise kasị GDP na ụwa. Ebe na-esonụ afọ 15, India na-atụ anya gafee Brazil, England, France, Germany na Japan. The International Monetary Fund (IMF) kwuru na mba ga-enwe kasị ọrụ na ụwa na-esonụ afọ 15.
Mgbe Japan na-ekpe ikpe na-na-enweghị mba. N'ihi na mgbe ya na aku na uba soared na 1990s na ahụmahụ a agaghinihu adọ, Japan si aku n'uba ga-adịghị ewe, ese Japan si ranking sekpuru anọ na listi mba na ndị kasị ibu aku na uba na ụwa site 2030.
"Japan bụ otu ihe dị mkpa na otú ngwa ngwa ị pụrụ inweta yiri downgrades akụ na ụba Ọdịdị," wee sị JP Morgan isi Economist Bruce Kasman dị ka e hotara site Bloomberg, Sunday (04/12/2015).
E wezụga Japan, France na-buru amụma iji dobe atọ ọkwá na ọkwá 8 na PBD nke US $ 3.3 puku ijeri na Italy dara abụọ n'ebe nke 11 ọnọdụ na a GDP nke US $ ma gụọ 2.3 puku ijeri.
Ka ọ dịgodị, Indonesian aku na uba na-atụghị na-họọrọ 13 na listi mba na ndị kasị ibu na aku na uba na a GDP nke US $ 2.1 puku ijeri na 2030, ihe karịrị Australia na ọnọdụ 14 na South Korea na 15 ọnọdụ na a GDP nke US $ 1.9 puku ijeri.
"E nwere ọtụtụ nke ejighị ihe n'aka. Bụ China ike na-eto eto 4 percent na 6 percent, e nwere ọtụtụ ihe anya ọ ga-abụ na akụ na ụba ụwa. Ma ọ bụ ma India nwere ike na-eto eto site 3 percent na 8 percent. Nke a bụ nnukwu ihe dị iche mgbe ị na ikpokọta ha n'oge agadi, "ka o kwuru.
N'ozuzu, Jamaica na-atụghị na-kasị ala ọnọdụ ịwụfu dị ukwuu dị ka 13-egosiputa 136 na 2030. Ọ bụ ezie na Uganda ga-aghọ mba na kasị ukwuu ọganihu ebe rigoro 18 n'ohu ka ọnọdụ 91.
Posted by needsjobslowongankerja at 11:36 PM
ASO LENDING Insurance August 19, 2016 at 1:36 AM
comfort frank August 10, 2017 at 2:09 AM
Ị chọrọ 100% ego? Enwere m ike ijere gị ozi ego na obere nsogbu nloghachi nke mere anyị ji kwụọ gị ụgwọ naanị 2%. Ihe ọ bụla ọnọdụ gị, ọrụ onwe onye, lara ezumike nká, nwere nkwụ ụgwọ ụgwọ ego, anyị nwere ike inyere aka. Ịgbanwegharị ihe karịrị 1 ruo afọ 30.Cheta anyị na: comfortfrankloanfirm@gmail.com
Ị na-achọ ego mgbazinye oge ma ọ bụ obere oge
1 Aha zuru ezu: ............................
2 Adreesị ịkpọtụrụ: .......................
5. Onyinye ego a chọrọ: ....................
6. Ụgwọ oge: ...................
7. Direct nọmba ekwentị: .................
Ịhụnanya buru ibu,
Mrs: nkasi obi